Somali Organization for human rights and intergration
SOMALIDA KU NOOL DALKA NORWAY WAXEEY U BAAHAN YIHIIN INEEY LA IMADAAN ISBADAL DHAB AH
HalganTvNews oo wax Ka Weeydiyay Mohamed Abdulkhadir oo Ka Tirsanaa Masuliyiintii La Kulmay Wasiirka Wax,barashada Dalka Norway.
Shir aan uga hadlaynay caqabadaha hortaagan isdhexgalka bulshada ee wadankaan Norway ayaan kula qaadanay shalay Xarunta wasaarada Waxbarashada iyo isdhexgalka Bulshada.
Labada qaybood ee ay wasaaradu ka kooban tahay ee kala ah isdhexgalka (integrasjon departementet) iyo waxbarashada ( Kunnskap departementet) ayaa ka soo qayb galay kulankaan iyo wasiirka.
Maxaa hortaagan integrasjon sax ah inuu ka dhaco Norway?
Aragtidayda Waxaan u gudbiyey wasiirka iyo wasaaradiisaba inay hortaagan yihiin ama caqabad ku yihiin waxyaalaha soo socda:
10 CAQABADOOD EE SOMALIDA NORWAY HOR TAAGAN
1: Waxaa hortaagan siyaasadaha qalafsan ee dhanka sharciyada oo walwal badan ku haya somalida. For example ( go aamada wasaarada cadaalada norway kasoo baxay oo dhaawacaya integration sax ah inuu dhaco).
2: Aqoon darada waaridka soomaaliyeed qaybo ka mid ah siiba dadka waawayn ( luqada wadankaan iyo aqoonta guudba).
3: Isticmaalka magaca diinta ee sida qaldan loo isticmaalo ( dhinicii doonaba ha isticmaalaane).
4: Lug jiidka iyo daalinta nidaamka shaqada ee Nav ay isticmaasho iyo waxa loo yaqaan (arbeids diskriminering temaer).
5:Nidaamka introduction programka oo aan effective ahayn lagana gaarin natiijadii laga rabay taas oo wasiirku nala qaatay!.
6:Media norskaha ( warbaahinta Norway) oo aan waxyaalaha positivka ah kor u soo qaadin halka uu negativka buumbuumiyo dhinaca Soomaalida.
7: Wada shaqayn la aanta dawlada iyo somalida ( inuusan jirin team u dhaxeeya Somalida iyo dawlada kuwaas oo ka tarjumaya danaha somalida norway)
8: Baqdin ku kala dhex jirta nidaamka barnevernetka ( caruurta oo waaridkood laga qaado) iyo somalida norway.
9: Inay jiraan xisbiyo u arka integrationka one way communication ( adoo faaruqa ii imaw aan kugu shubo wixii aan rabo). Wuxuu wasiirku nala qaatay inuu isdhexgalku noqonayo labada dhinacba inay kala faa idaystaan.
10: IslamoPhopia ( baqdinta faraha badan ee aan xaqiiqda ku salaysnayn ee islamka laga qabo) iyo xagjirnimada dhinaca kale ah oo dadka qaarkiis ay isticmaalayaan.
XUQUUQDA QORALKAN www.halgantvnews.com